Shina: Sarkozy ve no fototry ny olam-pifandraisan’i Shina sy Frantsa? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2008 19:44 GMT
Ekeko tokoa fa aingampanahy avy amin’ny GVO Lingua ity lahatsoratra ity. Ho avy hanatrika ny lalao olaimpika RaBush, ny fanapahan-kevitry ny Filoha frantsay Nicolas Sarkozy kosa dia miankina amin’ny vokatry ny fifampidinihana eo amin’ny Beijing sy ny Dalai Lama, mandeha amin’izao fotoana izao. Mandra-piandry izany ary, maro amin’ny mpiserasera Shinoa no miteny amin’ i Sarkozy tsy ho lany andro hanatrika izany.
Nitsikera ny Filoha frantsay Sarkozy noho ny fitsapatsapana te-hanatsara nefa mikaviavia ny fifandraisana eo amin’ny Shinoa sy ny Frantsay tamin’ity herinandro ity ny masoivohon’ny Wen Wei Po ao Paris Atoa Zheng Ruolin mikasika ny heviny momba an’i Tibet raha nanasonia lahatsoratra nosoniaviny hoe ‘Mpanao gazety Shinoa’ hita ao amin’ny Rue89.com. Raha nahita izany ny mpamaham-bolongana ao amin’ny Sohu ‘Cai Xiongshan’ dia nandika ny maro tamin’ny filazan-kevitra (Mpamaham-bolongana ao amin’ny Sohu tokoa manko i Zheng btw ) ho amin’ny teny Shinoa, ary indreto misy vitsy atolotra anao:
Mandrangitra an’izao tontolo izao i Sarkozy amin’izao dridradridram-politika tsy misy dikany ataony izao.
Fahafahana e, Fitoviana e, Firahalahiana e, mino an’izany ve ianareo? Frantsay aho fa efa ela no tsy ninoako izany intsony, tahaka an’i dadabe noely e.
Tahaka ny anao ihany koa ny eritreritro hoe hahatezitra ny rehetra ny filoha Sarkozy raha mbola manohy izao lalao mampidi-doza ataony izao.
Ny tsy itovizako hevitra aminao intsony kosa dia ny faharesen-dahatra ao aminao fa misy fiantraikany amin’ny hevitra ankapoben’ny frantsay ny hevitra shinoa.
Tsarovy fa tamin’ny nanoheran’i Paris ny ady tany Iràka dia tezitra aok’izany tamin’ny fihetsiky ny frantsay ny Amerikana ary nahitana fanaratsiana Frantsay tany Etazonia. Na teo aza izany, raha ambany ny tahan’ny fanohanana an’i Chirac tamin’izany fotoana izany, ny noho ny nataony nampahatezitra velively ny Amerikana tsy akory.
Raha momba ny mpizahatany Shinoa kosa, raha toa tokoa moa ka tsy te-hankany Frantsa intsony ry zareo, fa ny tsy azoko loatra nahoana no manery ankolaka ny hanao ankivy ny fahatongavana any Frantsa ny fitondrana Shinoa. Fihetsika tsy mendrika ny firenena handray ny Lalao olaimpika kosa izany amiko.
Hamarana azy aho amin’ny eboebonteny ataonao: “Mila asa izy ireo, mila ny fampakarana ny fahafaha-mividy, mila ny fifehezana ny sondrom-bidim-piainana…Ary Shina irery ihany no afaka mitondra izany ho azy ireo fa tsy misy hafa.”
Aoka i Shina tsy hijabaka ho amin’izany fahadisoam-pijerena izany. Tsy mahafehy ny tontolony akory ka hino fa afaka manao izay tiany atao amin’ny toekarenanay, manantena aho fa fomba fijerinao samirery izany.
Mino aho fa amin’izao vanimpotoanan’ny fanantoloana iainantsika izao, dia hisy fiantraikany amin’ny vahoakan’ny firenena hafa ihany ny hevitry ny vahoaka iray, efa tsy misy fizarantany tsy azo ihoarana loatra anie ny fivezivezen’ny vaovao amin’ny aterineto e, ary ho voasehonay sy ho voaporofonay aminareo ihany noho ny fahatsorana sy ny ezaka ataonay fa tsy araka izay tadiavina ampinoana anareo ny zavamisy any Tibet sy Shina. Tany nipoiran’i Voltaire sy i Rousseau ihany i Frantsa, Tokony hisokatra tsara ny masony mba hihainoany sy hamantarany ny riba hafa, mba tsy hanilika avy hatrany tsy mahalala ny marina akory ! 15 taona no niainako teto, ary hitanao fa, maro (angamba ny mpiray tanindrazana amiko taloha) no miampanga ahy ho tsy mahalala na inona na inona amin’ny firenenareo. Ka manontany tena aho hoe firy amin’ny olona eto moa no efa nandia ny fireneko. Noho izay, misy ilana azy mandrakariva ny manazava, ny miady hevitra ao anaty fahalalahantsaina, raha misy tanora frantsay iray niaina tambanin’ny fanompoana nandritra ny fitondran’ny Dalai Lama, dia ho tsapany ny fanavaozana demokratika nitranga tamin’ny taona 1956… Ary mifanjohy hatreo ny fanazavana rehetra !
Raha ny momba ny hoe mila asa izy ireo, mila fampakarana ny fahafaha-mividy sy ny fifehezana ny sondrom-bidim-piaiana… Ka i Shina no afaka mamaha izany fa tsy misy hafa. Marina ny hevitrao, nikaviavia aho, nieritreritra ny hanainga adihevitra dia naleo tsindrotsindrona toy izay nanome rano matimaty iray vera, nanevateva ny Frantsay koa aho ka tena ialako tsiny be dia be ny amin’iny ! Raha ho an’ny olotsotra iray dia safidy izany, fa ho ana Filohana Repobilika kosa, moa tsy ho amin’ny tombotsoam-bahoaka no iasany ? Momba mpizaha tany Shinoa kosa, tsy afa-mandrara afa-tsy ny mpiasam-panjakana tsy hankany Frantsa ny fitondrana, fa tsy ny rehetra.
Misaotra amin’ny fampitandremana fa hitandrina aho amin’ny manaraka.
Fantatry ny maro fa misy ny fampielezankevitra ofisialy atao any amin’ny firenena lazaina fa tsy demokiratika. Maro koa ny mino fa tsy misy izany fampielezankevitra ofisialy izany any amin’ny firenena lazaina fa demokiratika ! nefa ny tena ratsy, sy tena mampidi-doza, ny vondrona fampahalalam-baovao miankina amin’ny vondron’ny mpanankohariana no tena « manao fampielezankevitra ».
Ary farany, Aoka hireharehantsika ny fahaleovantenan’ny fampahalalam-baovao frantsay ka omeo lesona i Shina!
Mampihomehy ihany rehefa manome ny heviny Atoa Zheng, tsapa avy hatrany fa tsy Shina akory Lafrantsa, fa eto Frantsa anie azo atao ny mitsikera tsy amin’ahiahy ny filoha. Fa ny tsy azoko hatramin’izao na dia mamerimberina ny mamaky ny lahatsoratra mitovy lohahevitra aza aho : Fa maninona no manintona ny olona tahaka izao ny fifandraisan’i Frantsa sy Shina ? Efa manakaiky ny firediredena izy ity. Angamba manana soatoavina tsara izahay eto Frantsa tsara, manana tarigetra nahafinaritra, nisy revolisiona izay adino ny endrika ra mandrika nananany teto ? Angamba noho ny fisian’ny farasisan’ny politikam-panjanahana amin’ny endriny vaovao, izay mahatonga ny firenena eoropeana sy Lafrantsa indrindra indrindra mamerimberina amin’ny rehetra manerana ny vazantany hoe hatraiza moa ny fahendrenay sy ny fanajanay ny hevi-bahoaka ?
Koa nahoana moa no midaroka an’i Frantsa tahaka izao? Fa angaha moa tsy Angiletera no nanangana ady tamin’i Shina hifehezany ny lalan’ny Rongony?
Atoa Zheng, tena mitovy hevitra aminao tanteraka aho ! Tokony hieritreritra i Sarkozy. Tsy hoe tsy maintsy atao amin’ny fomba fanao frantsay hatrany ny fikarakarana ny raharaha shinoa. Ankehitriny efa afa-mametraka ny « Tsia » eto amin’izao tontolo izao i Shina, Nahoana ?
Ekana fa manana olana maro i Shina, saingy afa-mivoatra hatrany i Shina. Tsy maintsy atao izay hahalalan’ny Frantsay kokoa an’i Shina, fa raha tsy izany dia mbola hieritreritra izy fa toy ny tamin’ny andron’i Mao hatrany i Shina.
Nankany amin’ny Anjerimanontolo tany paris aho hifandray tamin’ny mpianatra. Misy ny mpianatra tsy mahalala akory hoe aiza ho aiza ao Shina i Tibet, nefa dia sahy miteny an’i Tibet ho tahaka ny mpahalala manokana momba azy. Tsy matotra izany ! Fahafahana, Fitoviana, Firahalahiana tena ilaina tokoa fa tsy tokony hanaovana hevitra ambadika ny Fahafahana, Fitoviana, Firahalahiana. Tsy hanaiky izany velively ny vahoaka Shinoa!
Ary ity kosa dia iray amin’ireo hevitra mihoatra ny 140 hita ao amin’ny lahatsoratry Xiongshan:
Fahafahana, Demaokirasia ary Firahalahiana, Teny mba mambabo fo loatra! Saingy, miankina be dia be amin’ilay firenena io sy ny fivoarany ary ny riban-kolontsainy. Raha tsy nisy ny fananiham-bohitra nataon’ireo fahefana valo niara-dia, raha tsy voazarazara ny Fahefana, raha tsy be loatra ny onitra, dia angamba mba nahazo ny Fahafahana, Demaokirasia ary Firahalahiana talohaloha kokoa izahay. Adinondry zareo mihitsy angaha fa efa tsy menatry ny nanani-bohitra koa izy ireo ? Efa nalainy ny volamenantsika sy ny volafotsintsika ary zava-mahadomelina no natakalony izany ho antsika ? Izany no antony nahatonga ny vahoaka ho voageja, kere, afa-baraka ary tratra aoriana nandritra ny fotoana elaela raha miohatra amin’ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika. Koa azontsika heverina ho fahadisoantsika ve izany ? Efa eo amin’ny lalan’ny fivelarana sy ny fahafenoankarena ny vahoakantsika amin’izao fotoana izao, mijinja ny vokatry ny asa mafy sy ny fahakingantsika. Mirediredy fotsiny ireny, nahoana hoy ianao? Inona no atahorany ? Sa izany no ataony hoe « fahafahana, demaokirasia ary Firahalahiana?” Sa izany no “fanambarany ny zon’olombelona ”? Izay fahamarinana izay mihitsy no tsy azoko. Tsy fantany akory hoe nandritra ny fiankohonam-panjakana iza na tamin’ny vanim-potoanan’ny inona no nivoahan’ny Bokin’ny Antsa , fa azony atao tsara aloha ny mandray diso sy mitsikera izay ao anatiiny e ! Tsy fantany akory hoe aiza ho aiza ao amin’ny sarintanin’i Shina no misy an’i Tibet, fa afa-mamadika ny tantarany izy ary mandiso ny toerana misy azy. Moa va tsy mahatsikaiky izany ? Izany no votoatin’ny realpolitik!